Amanqaku kaMehul Rajput Martech Zone |
Amanqaku ngu UMehul Rajput
Intengiso yeapps ihlala iyinto ephambili ekunciphiseni ii -apps eziqhelekileyo ezivela kwii -apps eziyimpumelelo. Iphulo elilungileyo lokuthengisa alinakwenza kuphela ukuba imveliso inomdla kodwa likwazise ekuqwalaselweni ngabantu abaninzi. Kwaye ngamanye amaxesha, zizonke iimfuno zeapp. Zininzi ii -apps ezilungileyo ezingafumani phantse uninzi lwazo njengoko kufanelekile kuba iphulo labo lokuthengisa lalingenanto okanye lingachanekanga ekubambiseni ubume beapp. Ne
NgoLwesibini, Oktobha 25, 2016 UMehul Rajput
Ngaba ujonge ukukhupha eyona app inkulu ngalo lonke ixesha ehlabathini? Kulungile, siyakholelwa kuwe, kodwa kuqala jonga kwezi ngcebiso malunga nendlela onokuyibeka ngayo ukuze iphumelele. Uhlelo lokusebenza olupholileyo ayisiyiyo kuphela into ekunika impumelelo, kodwa kunye nesicwangciso esifanelekileyo sokuthengisa kunye nokuphononongwa okuhle. Qhubeka ufunda ukuze ufumane indlela onokufumana ngayo iCandy Crush yesi sizukulwana: Yiba ngaphakathi